Caqli-gal: Sidaad u Isku-dhajin kartaa xogta ka timaada Craigslist
Craigslist macnaheedu waa goobta ugu adag ee lagu xoqo. Si kastaba ha noqotee, rukun xogeed oo habboon r ayaa ka dhigi kara geeddi-socodkan yareynta niyadjabka. Inkastoo aad si sahal ah uga qaadi karto xogta API-ka qaar ka mid ah, Craigslist's API ma ogola inaad qaadato macluumaadka akhriska kaliya. Taa baddalkeeda, waxay u ogolaataa dadka isticmaala xogta, xitaa inta badan. Si kastaba ha noqotee, waxaad weli xoqin kartaa Craigslist haddii aad dooranayso midda saxda ah qalabka wax burburiya .
Xulashada Maqaalka Craigslist Calaamado ah
Ujeeddadaadu waa inaad doortaa xaansho oo kuu sahli karta inaad soo qaadato dhamaan macluumaadka aad u baahan tahay - bulletin de salaire 2015 nounou. Waxaad dooran kartaa warqad lacag la'aan ah ama mid la bixiyay.
Macluumaadka Bilaashka ah ee Wareegta
Dareemku waa xeeldheer ujeedad xeeldheer oo kaa caawineysa inaad xoqto Craigslist. Waxay bixisaa qaar ka mid ah adeegyadii ugu fiicnayd ee bilaashka ah, maaha kaliya Craigslist laakiin goobo kala duwan. Haddii aad rabto in aad qaadato hawlaha aasaasiga ah ama culus, waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad tixraacdo dukumeentiga qoraalka iyo barista si aad u hesho.
Macluumaadka Lacagta Lacag bixiyay
Visual Web Ripper waa qalab xoogan oo kaa caawinaya in aad xoqdo Craigslist. Tilmaamaha sawir gacmeedka iyo qorista ayaa si fudud u isticmaali kara. Xaqiiqada ah in Visual Web Ripper waa mid aad u qiimo badan waa caqabad ku ah dadka isticmaala. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la siiyaa casriyeynta nolosha oo bilaash ah.
Waa midka ugu wanaagsan ee soo-saarka leh?
Haddii aad raadineyso adeegyo qashin tayo leh, ma khaldami doontid adiga oo dooranaya mid ka mid ah qodobbada kor ku xusan.
Ka warran waraaqaha xogta loo qorsheeyay Craigslist? Inkastoo ay wanaagsan tahay, sawirada loo sameeyay Craigslist waa kooban tahay sababtoo ah ma isticmaali kartid goob kale.
Craigslist waa dagaal badan oo ku saabsan ogaanshaha iyo joojinta qashinka. Haddii aad ogaato, cinwaankaaga IP waa la mamnuucay, waad qarin kartaa aqoonsiga adigoo isticmaalaya cinwaanka IP-ga. Wakiil ayaa ku qarinaya astaamaha iyo ficilkaaga si aad u awooddo xogta xoqidda adigoon la ogaan.
Sidee loo xallin karaa qoladaada?
Qalabaynta astaanta waxay kuxirantahay nooca xoqista aad rabto inaad isticmaasho. Si loo qaabeeyo Visual Web Ripper, fiiri "Tababaraha" tabeelo oo geli macluumaadka loo baahan yahay.
Si aad u saxdo Khaanada, waxaad u baahan tahay inaad tixraacdo dukumentiyada ku saabsan sida loo qaabeynayo magacaaga. Tani waa caadada markaad isticmaasho xaanshida xogta oo bilaash ah.
Waqtigaaga qaado oo hubso in aad wax kasta u dhigatid ka hor intaanad qalabkaaga geyn. Marka goobaha qalabka la hubiyo, bilaw xoqdo oo aad hesho dhammaan xogta aad uga baahan tahay Craigslist.
Codsiga Warbixinta Craigslist
Xogta Craigslist waxaa loo isticmaali karaa siyaabo kala duwan. Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad iibsato gaari la isticmaalay, waxaad xoqin kartaa dhammaan xogta baabuurta la isticmaalo si loo barbardhigo siciradooda iyo wixii la mid ah. Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa xogta Craigslist si ay u abuuraan hogaamiyaasha, tartamayaasha tartanka iyo wax badan oo kale. Kuwani waa siyaabo dhowr ah oo loo isticmaalo xogta la xoqay.
La Raadinayo Maanta
Hadda waxaad taqaanaa sida loo xareeyo xogta ka timid Craigslist. Qaado qalab wanaagsan oo la jarayo, waxaadna ka helaysaa wax kasta oo aad u baahan tahay Craigslist!